ဟန်းဂုရွာ: လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံ ၊ အလုပ်သမားထံမှ ဖြတ်ရန်မဟုတ်
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတိုင်း ထွယ်ဂျစ်ဂွမ့် (퇴직금) ဆိုတာကို သိကြပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။ အဲသည် ထွယ်ဂျစ်ဂွမ့်/toijikkeum/ဆိုတာကို မီဒီယာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Legal Retirement Allowance , Severance Allowance ဆိုပြီး ရေးကြပါတယ် ။ နောက်ပြီး အဘိဓါန်တစ်ခုမှာတော့ Redundancy Pay (လိုအပ်သည်ထက် ပိုသော လစာ) ဆိုပြီး သုံးထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ မြန်မာလို ပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ အရင်က ဆို အငြိမ်းစားလစာဆိုပြီး ပြန်ကြတာတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လုပ်သက်ခံစားခွင့် ၊ လုပ်သက်ခံစားငွေဆိုပြီး သုံးလာကြပါတယ် ။ အငြိမ်းစားလစာ (Pension: 연금) မဟုတ်တာတော့ သေခြာပါတယ် ။
နောက်ပြီး လုပ်သက်ခံစားခွင့် ဆိုပြန်တော့လည်း ခွင့်ရက် (Leave) နှင့် မှားနိုင်စရာ ရှိပြန်ပါတယ် ။ လုပ်သက်ခံစားငွေ ကတော့အမှားအယွင်းမရှိ သုံးလိုက သုံးနိုင်တဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုလို့ သဘောရပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ လုပ်သက်ဆုကြေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အကြိုက်ဆုံးပါ ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဝန်ထမ်းလောကမှာ တရားဝင်သုံးတဲ့ ဝေါဟာရပါ ။ အငြိမ်းစားလစာ ခံစားခွင့် မရမှီ နှုတ်ထွက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ လုပ်သက်ကို နောက်ဆုံးထုတ်လစာနှင့် မြှောက်ပြီး သတ်မှတ် ရာခိုင်နှုန်းအရ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ချီးမြှင့်တဲ့ငွေပါ ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Gratuity လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အခု ကိုရီးယားမှာ ပြောနေကြတဲ့ 퇴직금 ဆိုတာနှင့် သဘောသဘာဝ တွက်ချက်ပုံက အစ တော်တော်လေး နီးနီးစပ်စပ်ရှိလို့ ကျနော်ကတော့ ထွယ်ဂျစ်ဂွမ့်ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဝေါဟာရကို လုပ်သက်ဆုကြေးဆိုပြီး သုံးစွဲသွားပါ့မယ် ။
အီးပီလုပ်သားများဟာ အလုပ်စံချိန်စံညွှန်းဥပဒေ (the Labor Standards Act) အရ လုပ်သက်ဆုကြေး ကို ခံစားခွင့် ရရှိကြပါတယ် ။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတစ်ခုမှာ အနည်းဆုံး ၁ နှစ် ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုလျင် ၊ ၁လစာ ကို အပိုဆောင်းပြီး ဆုကြေးအဖြစ် ခံစားခွင့်ရှိပါတယ် ။ ၁၂လ အလုပ်လုပ်ပြီး ၁၃ လစာ လခရတဲ့ သဘောပါ ။ ခံစားခွင့်ရမယ့် ဆုကြေးကတော့ ၊ နောက်ဆုံးထုတ်လစာ ၃လစာ (ရက် ၉၀ စာ)ရဲ့ ပျမ်းမျှလစာကို လုပ်သက် (နှစ်မပြည့်လျင် အစွန်းထွက် ရက်လ တို့ကို နှစ်ဖွဲ့ပြီး) နှင့် မြှောက်ပြီးရတဲ့ အဖြေပါ ။သို့ပေမယ့် ကိုရီးယားအလုပ်ရှင်တော်တော်များများဟာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများကို လုပ်သက်ဆုကြေး မပေးချင်ကြပါဘူး ။ တစ်ချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ လစာထဲမှာ ပေါင်းထည့်ပြီး တွက်ပေးကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲသည်လို မလုပ်ရဘူးလို့ သက်ဆိုင်ရာက ညွှန်ကြားထားပြီးပါပြီ ။
အခု အီးပီလုပ်သားများကိုတော့ လုပ်သက်ဆုကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး အကာအကွယ် ပေးထားတာပါ ။ အဲသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အီးပီအလုပ်သမားအသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံကို ထားကြရပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် ကျနော့်အထင် အဲသည် ဥပဒေဟာ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ အာမခံရဲ့ အမည်ခေါ်တာကအစ ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ပါ ။ ကိုရီးယား လိုတော့출국만기보험တဲ့ ၊ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Departure Guaranty Insurance တဲ့ ။ ကိုရီးယားအခေါ်အဝေါ်ကို
မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြည့်ကြရအောင် -
- 출국: Departure: တိုင်းပြည်မှထွက်ခွါခြင်း
- 만기: Expiration of term: သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း
- 보험: Insurance: အာမခံ ။
အားလုံးကို ပေါင်းလိုက်လျင် “ တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွါရန် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းအာမခံ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ရပါတယ် ။ ကျနော့်အလိုအရ ပြောရရင်တော့ လုပ်သက် ဆုကြေးအာမခံ (퇴직금보험) ဆိုလျင် ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထင်သာ မြင်သာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ် ။ ဒီ အာမခံကြေးကိစ္စ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေသာ မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ပါ ။ ကိုရီးယားတွေ ကိုယ်တိုင်က မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေကြတာပါ ။ ကိုရီးယားလူ့ အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကလည်း မနေရသလို ၊ အလုပ်သမားရုံး ၊ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားအကူအညီဆင်တာ စသည်စသည် အားလုံး အလုပ်ရှုပ်ကုန်ကြရတာပါ ။ ဘယ်လောက်ထိ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေကြသလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် 출국만기보험ဆိုတာကို အင်တာနက် Search မှာရိုက်ပြီး ရှာကြည့်ပါ ။ အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။
လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံ (출국만기보험: Departure Guaranty Insurance)
အလုပ်သမား ၅ ဦးနှင့်အထက် ရှိတဲ့ အလုပ်ရုံ စက်ရုံများအတွက် အလုပ်ရှင်က ထားရှိရတဲ့ အာမခံ ဖြစ်ပါတယ် ။ လစဉ်ဖျမ်းမျှလစာငွေ၏ ၈့၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသွင်းရမှာပါ ။ အဲသည် အာမခံကို မထားလျင် ဝမ် သန်း ၅ဝ အထိ ဒဏ်ငွေ ချမှတ်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲသည် အလုပ်ရုံမှာ အနည်းဆုံး လုပ်သက် ၁ နှစ် ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အီးပီအလုပ်သမား တစ်ဦးဦးဟာ အဲသည် အလုပ်ရုံမှ အနားယူ (ထွက် ၊ ပြောင်း ၊ ပြန်) တဲ့ အခါ မိမိလုပ်ခဲ့သည့် လစာ ၁ လစာ ( အကြမ်းဖျင်း) ကို လုပ်သက်ဆုကြေး (Legal Retirement Allowance) အဖြစ် ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်ရှင်က မပေးလျင် အာမခံ ကုမ္ပဏီသို့ တောင်းခံ လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါတယ် ။ ၁-နှစ်မပြည့်ဘဲ အလုပ်ရုံမှ ထွက်လျင် (ပြေးလျင်) သို့မဟုတ် ပြောင်းလျင် အာမခံထားပေးသူ (အလုပ်ရှင်)က ပြန်လည် ထုတ်ယူ နိုင်ပါတယ် ။ မိမိ အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော လုပ်သက်ဆုကြေးငွေ ပမာဏ ဟာ ၊ အာမခံကမ္ပဏီမှာ ပေးသွင်းထားတဲ့ အာမခံကြေးထက် များနေမှာပါ ။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ လုပ်ငန်းရှင်ဟာ အလုပ်သမားသို့ ခြားနားငွေကို ထုတ်ပေးရမယ်လို့ “ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားငှားရမ်းခြင်း အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းဥပဒေ ” ပုဒ်မ၂၁ ၊ (ပြည်ထွက် ကာလကုန်ဆုံးအာမခံ ၊ အပ်ငွေ) ပုဒ်မခွဲ ၃ (외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령 제21조(출국만기보험.신탁) 3항' ) မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ် ။
လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၊ မြန်မာအီးပီ လုပ်သားများ လက်တွေ့ ကြုံနေကြရတဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ် ။ အဲသည် လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံကြေး(출국만기보험) အဖြတ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စပါ ။ လုပ်ငန်းရှင်က မသိလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို ၊ သိလျက်နှင့် မတရားလူလည်လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဘယ်ဟာအမှန် ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်များသာ သိကြပါလိမ့်မယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု လုပ်သက်ဆုကြေး အကြောင်း ဂဃနဏ သိကြရပြီမို့ ၊ ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်လို အဖြတ်ခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်ဖြင့် ၊ အဲဒီ ဖြတ်ထားငွေများပြန်လည်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ် ။ အဲသည် မိတ်ဆွေရဲ့ ပြောပြချက်အရတော့ သူရဲ့ စက်ရုံမှာ အီးပီ ရွှေခံများလည်း ရှိပြီး ၊ အခြားနိုင်ငံခြားသားများလည်း ရှိပါသတဲ့ ။ သည် ဖြတ်ငွေအကြောင်း ရှင်းပြပေးဖို့ စီနီယာကိုကိုရွှေခံကို ပြောတော့ လျှာရှည်မနေနဲ့ ၊ ပြောလို့လည်းမထူးဘူး ။ သူများတွေလည်း ဒီလိုဘဲ အဖြတ်ခံနေရတာဘဲ လို့ ရှင်းပြသတဲ့ ။ သူဌေးမင်းကို မေးပြန်တော့ ပြန်တဲ့အခါ ပြန်ရမယ့် ဟာဘဲ လို့ ပြောသတဲ့ဗျ ။
သူဌေးမင်းခင်ဗျာ ။ လုပ်သက်ဆုကြေးငွေကို ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ပေးနေရတဲ့ သဘောလို ဖြစ်နေပါတယ် ။
ပြောလို့ မရလျင် ဒီစာကိုပြပါ
မှတ်သားစရာ ကတော့ “ လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံ ၊ အလုပ်သမားထံမှ ဖြတ်ရန်မဟုတ်” တဲ့ခင်ဗျ ။ ဒီတော့ လုပ်သက်ဆုကြေးအာမခံကို လစာထဲက မဖြတ်ဖို့ ပြောကြရမှာပါ ။ ကိုရီးယားသူဌေးမင်းများကို ပြောမရလျင်ဖြင့် ၊ ဒီစာကလေးပြလိုက်လျင် အမှန်ကို သိနိုင်လောက်တယ်လို့ ထင်မိကြောင်းပါခင်ဗျာ ။
1. 외국인노동자가 계약기간 만료 후 퇴직금을 수령할 때, 대부분의 외국인노동자들이 귀사에 출국만기보험을 신청해야 하는 것을 모르고 있습니다. 또한 신청서 양식이 한글로 되어있으므로 외국인노동자 스스로 출국만기보험을 신청하는 것이 어려우므로 출국만기보험금 신청방법에 대하여 재고하여 주시기 바랍니다.
답변 - 본 제도는 기본 한국어교육을 이수한 외국인 근로자들을 대상으로 하므로 신청서 양식은 기본적으로 한글로 되어있습니다. 그런데 당사는 신청서가 아니더라도, 고용지원센터에서 발급한 출국예정사실확인서(재입국취업활동확인서) 및 고용변동확인서 등을 신청서로 간주하여 받고 있습니다. 이를 활용하시면 노동부에서 요구하는 바와 같이 사전 고용변동 신고 후에 보험금 신청이 가능하므로, 이를 널리 홍보하여 주시기 바랍니다.
2. 출국만기보험은 1년 이상 근무 후 외국인노동자가 직접 수령했을 경우 수령액은 퇴직금의 약 70%인 경우가 대부분입니다. 하지만 많은 사용자는 귀사에서 지급하는 출국만기보험으로 퇴직금을 정산했다고 생각합니다. 출국만기보험 수령 후 사용자에게 퇴직금 정산을 요청하는 상담이 계속 증가하고 있으므로 보험금신청서와 사용자안내문에 ‘근로자퇴직급여보장법’에 의하여 출국만기보험금 수령 후 퇴직금을 정산하여야 함을 안내하여 주시기를 제안합니다.
답변 - 본 보험은 '외국인근로자의고용등에관한법률'에 의하여 법이 정한 대로 운영되는 보험입니다. 향후 근로자 및 사용자들의 오해를 줄이기 위하여 보험금 신청서 양식에 '근퇴법'에 의하여 출국만기보험 수령 후 퇴직금을 정산하여야 함을 안내하는 문구 추가를 적극적으로 검토하도록 하겠습니다.
1.고용허가제 4대 보험 중 퇴직금을 대신 하여 지급하는 출국만기보험은 사업주가 퇴직금의 일시지급에 따른사용자부담을 완화 시키는데 목적이 있으며 상시 근로자 5인 이상 사업장에서는 받드시 가입하여야 하며, 또한 취업활동기간이 1년 이상 남은 외국인근로자를 고용한 사업장이 해당 되겠읍니다.
2.실제 퇴직금과 보험회사에서 지급한 금액이 다를수 있읍니다.
3.그이유는 사업주가 고용허가서에 기록된 월 평균 임금에서 8.3%을 매월 납부하고 근로자는 실제 그 이상 급여를 지급받고 있기 때문에 다를수 있으며, 실제 이런 경우가 많이 발생되고 있읍니다.
4.이문제가 발생되면 ' 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령 제21조(출국만기보험.신탁) 3항'에 근거 근로자퇴직급여보장법 제8조 1항 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직하는 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다. 이 규정에 의한 퇴직금의 액보다 적을 경우에는 그 차액을 외국인 근로자에게 지급하여야 한다. 라고 명시 되어 있읍니다.
5.그러나 일부 사업장에서 보험회사가 지급하면 퇴직금을 전액 지급하는걸로 생각하신 사업주께서 있으신것 같읍니다. 근로자가 퇴사를 한다면 사측에서 퇴직금을 계산해보고 보험회사에서 지급한 금액이 실 퇴직금에 미달하여 차액이 생길 경우 그 차액 만큼 근로자에게 지급하여야 한다고 사료 됩니다.
일단, 사업주와 대화를 하시고 해결되지 않는다면 사업장 관할 노동부 근로감독과에 진정서를 작성 제출하시면 됩니다.
법적 근거 : 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령 제21조(출국만기보험.신탁) 3항'
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 1:06 AM
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, အလုပ်သမား အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း
◆ကိုရီးယားအလုပ်သမား ဥပဒေတွင် ၁-နှစ်အထက် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သမားအား လုပ်ငန်းရှင်မှ လုပ်သက်ခံစားခွင့်ငွေအား ပေးရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
အလုပ်ရှင်မပါ အလုပ်သမားအရေအတွက် ၄-ယောက် အောက် လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါက လုပ်သက်ခံစား ခွင့် မရရှိနိုင်ပါ။
အလုပ်သမားအရေအတွက်၎ယောက်ရှိသည် ဆိုသော် လည်း တနှစ်လုံးလုံး အလုပ်များတဲ့အခါ နေ့စားများ ခေါ်ယူအသုံးပြုလိုက် အလုပ်ပါးတဲ့အခါ ၄ယောက်နဲ့ လုပ်လိုက် အခြေအနေရှိတဲ့ စက်ရုံများဆိုရင်တော့ တနှစ်လုံးလုပ်တဲ့ ပျှမ်းမျှအလုပ်သမားဦးရေကို တွက်ချက်ရပါတယ်။
တွက်ချက်လို့ လက်ရှိအလုပ်သမားက ၄ဦးပဲရှိသည် ဆိုသော်လည်း ပျှမ်းမျှအလုပ်သမားက ၅ဦးဖြစ်ပါက လုပ်သက်ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
◆လုပ်ငန်းရှင်သည် ၁-နှစ်အထက် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သမားအား ၁-နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှရက်-၃၀ စာအား အလုပ်ထွက်ပြီးနောက် ၁၄-ရက်အတွင်းပေးရမည်။
◆ဥပမာ အားဖြင့် အလုပ်သမားသည် ၂၀၀၆.၁.၁-ရက်နေ့မှအလုပ်ဝင်၍ ၂၀၀၇.၆.၃၀-ရက် နေ့ထိ အလုပ်လုပ်၍ ၁နှစ်ခွဲအကြာတွင် အလုပ်မှ ထွက်ခဲ့သည် ဆိုပါစို့၊
၄-လပိုင်းတွင် လစာ-၁ ၀၀၀ ၀၀၀-၀မ်၊
၅-လပိုင်းတွင်လစာ-၁ ၁၀၀ ၀၀၀-၀မ်၊
၆-လပိုင်းတွင် လစာ-၁ ၂၀၀ ၀၀၀-၀မ် ရရှိသည်ဆိုပါက
၄လ(ဧပြီလတွင် ရက်ပေါင်း ၃၀ရှိသည်)
၅လ(မေလတွင် ရက်ပေါင်း ၃၁ရှိသည်)
၆လ(ဂျွန်လတွင် ရက်ပေါင်း ၃၀ရှိသည်)
(၁ ၀၀၀ ၀၀၀+၁ ၁၀၀ ၀၀၀+၁ ၂၀၀ ၀၀၀) ÷
= ၁ ၆၃၁ ၈၈၀-၀မ်